Yintoni iJometri? Izinzuzo zokufunda iJometri
Ukulinganisa iiLines, imilo, ii-Angle, kunye neBindi
Ukubeka nje, i-geometry yisebe leemathematika eziphonononga ubukhulu, imilo, kunye nesimo semilo emi-2 kunye nemifanekiso engama-3. Nangona isazi seMathematika esiGrike sase-Euclid sithathwa ngokuba ngu "Baba weGeometri," ukuhlolwa kweJometri kwavela ngokuzimeleyo kwiinkcubeko zamandulo.
IJometri ligama elivela kwiGrike. NgesiGrike, igama elithi " geo" lithetha "umhlaba" kunye " metria" lithetha umlinganiselo.
IJometri iyakwicandelo ngalinye kwikharityhulam yabafundi kwi-kindergarten nge-12 bakala kwaye iqhubekela phambili kwiikholeji nakwi-postgraduate study. Ekubeni ezininzi izikolo zisebenzisa ikharityhulam yekharityhulam, iingcamango zokuqala zibuye zivakatye kuwo wonke amabakala kunye nokuqhubela phambili kumgangatho wobunzima njengoko ixesha liqhubeka.
IJyometri Isetyenziswa Njani?
Ngaphandle kokuphazamisa iincwadi zeJometri, i-geometry isetyenziswe imihla ngemihla malunga nomntu wonke. Ingqondo yakho yenza ukubala kweendawo zejometri njengoko uhamba unyawo lwakho ebhedeni ekuseni okanye ipaki efana nemoto. Kwijometri, uhlola ingqondo yendawo kunye nokuqiqa kwejometri.
Unokufumana i-geometry kwezobugcisa, ubugcisa, ubunjineli, i-robotics, i-astronomy, imifanekiso, indawo, uhlobo, ezemidlalo, oomatshini, iimoto kunye nokunye okuninzi.
Ezinye zezixhobo ezisetyenziswa rhoqo kwijometri ziquka ikhampasi, umqhubi, i-square, i-graphing calculators, i-Sketchpad yeGeometer kunye nabalawuli.
Igalelo elikhulu kummandla wejometri kwakuyi- Euclid (365-300 BC) owaziwayo ngemisebenzi yakhe ebizwa ngokuba yi "Elements". Siqhubeka nokusebenzisa imigaqo yakhe yejometri namhlanje.
Njengoko uphumelela kwimfundo eprayimari neyesekondari, i-geometry ye-Euclide kunye nokufunda kweJeometri yendiza, ifundiswa kuyo. Nangona kunjalo, i-geometry engekho ye-Euclidean iya kugxininisa kumabanga amabakala nakwiimatriki zeekholeji.
IJyometri kwiSchooling Early
Xa uthatha ijometri esikolweni, uhlakulela ukuqiqa kweendawo kunye nezakhono zokusombulula iingxaki .
IJometri idibene nezinye izihloko ezininzi kwizibalo, ngokulinganayo.
Ekuqaleni kwesikolo, ukugxilwa kwejometri kubonakala kwimilo kunye neziqina . Ukusuka apho, uhamba ukuya kufunda iipropati kunye nobudlelwane bobunjwa kunye neziqina. Uya kuqala ukusebenzisa izakhono zokuxazulula iingxaki, ukuqiqa, ukuqonda ukuguqulwa, ukulinganisa, kunye nokuqiqa kwendawo.
IJometri kwi-Schooling Later
Njengoko ukucinga okungabonakaliyo, i-geometry iya kuba ngakumbi malunga nokuhlalutya nokuqiqa. Kuzo zonke izikolo eziphakamileyo, kugxininiswe ekuhlalutheni izakhiwo zeempawu ezimbini kunye neyesithathu, ukuqiqa malunga nobudlelwane be-geometric, kunye nokusebenzisa inkqubo yoqhagamshelwano. Ukufunda i-geometry inikezela izakhono ezininzi ezisisiseko kwaye kunceda ukwakha izakhono zokucinga zeengcamango, ukuqiqa, ukuqiqa nokucamngca iingxaki .
Iingcamango ezinkulu kwiJometri
Iingcamango eziphambili kwiiJometri zilayini kunye namacandelo , imilo kunye neziqina (kuquka iipolgoni), i- triangles kunye nama-angles , kunye nomjikelezo wesangqa . Kwi-geometry ye-Euclide, ii-angles zisetyenziselwa ukufunda iipolgoni kunye ne-triangles.
Njengenkcazo elula, isiseko esisisiseko kwijometri-umgca-wenziwa ngabafundi beemathematika bexesha elidala ukumela izinto ezichanekileyo kunye nobubanzi obungapheliyo nobunzulu.
Iinjongo zejometri zezifundo zobunjwa obunemigangatho efana nemigca, izangqa, kunye nezixantathu, kakhulu kunoma yimuphi umzobo onokutsalwa kwisiqwenga samaphepha. Okwangoku, i-geometry eqinileyo ifundisisa izinto ezintathu ezinjengama-cubes, ama-prisms, i-cylinders kunye ne-spheres.
Iingcamango eziphambili kwiJometri ziquka izityalo ze-platonic , i- coordinate grids , i- radians , iiconic sections kunye ne- trigonometry . Ukufundwa kweengxande zexantathu okanye ii-angles kwisangqa seyunithi kwakha isiseko se-trigonometry.
"UThixo Uphumle Niyavuya NgamaGentlemen" ngabaculi abangamaKristu
Ngaba u-Obama ushintshile iProvense yeMeral Function Protocol?
Isikhokelo seKhokelo soPolitiki
Eyesibini iCongo yeMfazwe: ibutho lemithombo